Suuqa Iibka Ciyaartoyda Oo Maanta Xidhmaya, Kooxaha Ugu | Axadle
Suuqa Iibka Ciyaartoyda Oo Maanta Xidhmaya, Kooxaha Ugu
Marka laga yimaaddo ciyaaryahannadan suurtogalka ay tahay in Red Devils ay lasoo saxeexato, waxa kale oo furan albaabkeeda, waxaana la sheegayaa in saacado kooban gudahood ay AS Roma ku dhawaaqi doonto heshiis ay la gaadhay difaaca Manchester United ee Smalling oo xili ciyaareedkii horena amaah ugu ciyaarayay.
Juninho oo ah agaasimaha ciyaaraha Lyon ayaa xaqiijiyey in laacibkooda Depay aanay ka xidhin albaabka bixitaanka oo ay suurtogal tahay in saacadaha kooban ee hadhay uu ku biiro Barcelona, balse shuruudda dhinaca lacagta oo kaliya ay miiska taallo.
Waxa kale oo kooxda reer Spain laga hadal hayaa bixitaanka Ousmane Dembele oo Manchester United lala xidhiidhinayo.
Arsenal oo lala xidhiidhinayaya Thomas Partey iyo Houssem Aouar ayaa la eegayaa haddii ay hore ugu ruqaansan karto inay saxeexyo samayso. Waxa kale oo Gunners ay fiirsanaysay haddii ay fursad ka heli karto Chelsea oo ay ka doonayso laacibka Talyaaniga ah ee Jorginho oo ay amaah ku rabto.
Kooxda kubadda cagta Chelsea oo saxeexyadii ugu badnaa xagaagan samaysay ayaa iyagana la filayaa inay ka tagaan qaar ka mid ah laacibiinteeda khadka dhexe iyo difaaca intaba, laakiin sidoo kale doonaysa inay hal saxeex oo kale soo kordhiso, waana Declan Rice oo khadka dhexe uga ciyaaara West Ham.
Liverpool lama filayo inay saxeexyo cusub samayso, waxaase saacadaha kooban ee hadhsan ka tegi kara ciyaartoyda aan qorshaha ugu jirin tababare Jurgen Klopp, sida Harry Wilson oo kooxaha horyaalka Premier League ay doonayaan.
Min Talyaaniga, Faransiiska, Germany, Spain illaa Premier League, waxa ka dhici doona saxeexyo, waxaananu maanta samaynaynaa barmaajin LIVE aad ugala socon doontaan saxeexyada iyo xogta suuqa, kaas oo socon doona illaa daqiiqadda ugu dambaysa ee suuqu soo xidhmayo saqda dhexe ee caawa.